2013 Treadmill Deal: Merit 715T Treadmill Kaliya $ 349.99
Home » Amazon » Merit 715T Treadmill Kaliya $ 349.99 leh Boostada BILAASH AH
Dib-u-Celinta Fududeeyaha Waxay soo bandhigtaa 2013 Merit Fitness Treadmill Sale ka Amazon
Merit Fitness 715T Plus Treadmill on Sale Hadda oo kaliya $ 349.99 leh Boostada BILAASHKA
The Merit 715T Plus treadmill waxay fududeyneysaa in la bilaabo barnaamijka tababarka guriga dhexdiisa ah. 715T Plus treadmill waxaa lagu rakibay gaari tayo sare leh oo 2.5 THP (1.5 CHP). Treadmill wuxuu kuu fududeynayaa inaad sameysid jadwalkaaga shaqada. Waxaad ka bixi kartaa 0 ilaa 10 mile saacaddii. Way sahlan tahay in la kormeero horumarkaaga tababarkaaga sababtoo ah bandhigga saddexda daaqad ee LED ah, kaas oo raadinaya waqtigaaga, masaafadaada, xawaaraha, kaloorada gubtay, iyo in ka badan.
The Merit 715T sidoo kale waxay bixisaa xero farsamo oo leh 18-by-47-inch oo bixisa meel fara badan oo socod ah ama socod ah, oo ay weheliyaan nidaamka cirifoorka Aerosoft ee ka hooseeya suunka oo cagahaaga iyo lugahaaga ka go'ay shoog.
Qaar ka mid ah faahfaahinta kale waxaa ka mid ah barnaamijyada tababarka 4, qalabka 3 ee hagaajinta qalabka manhajka ah (laga bilaabo 0 ilaa 5 boqolkiiba), kantaroolka xawaaraha xaraaradda, iyo qaab wareegsan oo loogu talagalay kaydinta sahlan. The 715T waxay ku faantaa miisaanka miisaanka 250 waxayna qaadataa damaanad nololeed oo ku salaysan shaxda iyo hal-sano oo ah damaanad ku saabsan mootada.
Riix halkan si aad u iibsatid XnumXT Plus Treadmill
* Qiimaha $ 349.99 waa mid ka mid ah 6 / 30 / 13 2: 33 PM PM. Sicirka qiimaha iyo helitaanka waa sax marka loo eego taariikhda / wakhtiga la tilmaamay iyo in la bedelo
June 30, 2013 Jimicsiga Amazon, Merit, Treadmills No Comment	$ 349.99 Treadmill Free Shipping, 2013 Sale Treadmill, 715T Plus Treadmill, Merit Fitness Treadmill Sale, Merit Treadmill 715T